Sheekada Filimka Tubelight: Salman Khan Kaligiis U Daawo Filimkan Mana Gaarsiisno Heerka Bajrangi Bhaijaan! | Filimside –	Friday, July 21st, 2017	" alt="Filimside - logo" border="0" />
Sheekada Filimka Tubelight: Salman Khan Kaligiis U Daawo Filimkan Mana Gaarsiisno Heerka Bajrangi Bhaijaan!
Jun 23, 2017 - 10 Jawaabood	Waxaa Qoray: Zakarie Abdi Taariikh: June 23, 2017:
Waxaa tiyaatarada si rasmi ah loo saaray filimka weyn ee sida waalida ah loo wada sugaayay Tubelight waxaana hogaamiye ka ah Mega Star Salman Khan.
Salman waxaa looga bartay Ciid walbo inuu la imaado filim mada daalo dhameestiran iyo qiiro leh marka uu daawadayaasha raali galiyo asigana wuxuu helaa Blockbuster weyn.
Jilaayaasha filimka Tubelight: Salman Khan, Zhu Zhu, Sohail Khan, Om Puri, Matin Rey Tangu
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimka Tubelight: Salman Khan bandhigiisa wacan oo daacadnimo ka muuqato doorkana si xaqiiqo ah isugu ekeysiiyay, wiilka yar Matin Rey Tangu bandhigiisa wacan, SRK muuqaalkiisa martida ah iyo labada hees Main Agar iyo Kintu Parantu oo ah kuwo wacan muuqaal ahaan iyo cod ahaan.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Tubelight: Sheeko aad u liidato, qaabka uu ku dhamaanayo filimkaan oo lasii fahmi karo iyo dareenka filimkaan oo aan ahayn mid isku xiran.
Maxaan Ku Daawan Karaa Tubelight: Hadii aa tahay taageero Salman Khan dhab ah waad daawan kartaa filimkaan adigoo weliba ka xun inuusan sameynin ficilo Action iyo geesinimo leh, laakiin qofkii rabay filim Bollywood tayo wanaagsan kama heli doono Tubelight!
Fariinta Sheekada Filimka Tubelight Xambaarsan:
Xaafada Jagatpur ee ku taalo magaalada Kumaon waxaa ku nool Laxman Singh Bisht (Salman Khan) waa shaqsi iska maskiin ah xoogaana dhimirkiisa taam ahayn, waxaana marwalbo daryeelo, dadka ka celiyo noloshiisana ka warqabo walaalkiis ka yar Bharat Singh Bisht (Sohail Khan).
Dadka xaafada wey dhibaan weyna yasaan Laxman (Salman Khan) waxayna ugu yeeraan maskax yare (Tubelight) ama dabaal laakiin walaalkiis Bharat (Sohail Khan) ayaa la dagaalo kuwa sidaas dhahaan sidoo kalena walaalkiis siiyo difaac joogto ah si aan loogu xad gudbin.
Wax walbo si qurux badan ayay ugu socdeen Laxman iyo Bharat laakiin noloshooda waxay is badalee markii uu bilaawdo dagaalkii Hindiya iyo China dhex maray sanadii 1962, Bharat iyo dhalinta kale ee deegaanka waxaa loo qaadanaa inay dagaalka ka qayb galaan oo ay furanta aadaan.
Laxman wuxuu isku dayaa inuu ciidanka qorto laakiin tijaabooyinka jir ahaaneed ee laga qaaday ayuu ku dhacaa wuxuuna iska joogaa guriga asigoo kaligiis ah oo aan daryeel iyo jaceyl heesanin madaama walaalkiis Bharat dagaalka loo waday.
Haweeney Hindi ah balse asalkeeda China kasoo jeedo Lee Ling (Zhu Zhu) ayaa imaaneyso xaafada Laxman ku nool yahay ayada iyo wiilkeeda Guwo (Matin Ray Tangu) waxayna ka imaanayaan magaalada Calcutta.
Laxman marka hore wuu neceb yahay Lee Ling (Zhu Zhu) iyo wiilkeeda, laakiin markii dambe wuu soo dhaweesanaa waayo isaga ayaa qaadanayo falsafadii Ghandi oo ahayd qofka aad neceb tahay waalala saaxiibaa waxaana sidaas kula talinaayo odeyga u caqli celiyo marwalbo Banne Chacha (Om Puri).
Sidaa darteed Laxman, Lee Ling (Zhu Zhu) iyo wiilkeeda Guwo (Matin Ray Tangu) saaxiibo ayay noqonayaan inkastoo dadka xaafada neceb yihiin madaama loo maleeyo inay Chinese yihiin.
Laxman waxaa qalbiga kaga taagan sidii uu walaalkiis ku heli lahaa wuxuuna marwalbo ciidanka weydiiyaa halkii uu Bharat ku dambeeyay waxaana loo sheegaa in dagaalkii inta uu socday gacanta ku dhigeen ciidamada Shiinaha una badan tahay in la dilay!
Laxman ma quusto wuxuuna aaminsan yahay inuu maalin un walaalkiis heli doono sidoo kalena ninka talada siiyo marwalbo Banne Chacha (Om Puri) wuxuu u sheegaa in kalsoonidiisa ay gaarsiin karto inuu walaalkiis soo helo hadii uu wax walbo sameeyo.
Ugu dambeyntii Laxman walaalkiis masoo heli doonaa? Bharat masoo laaban doonaa? Lee Ling (Zhu Zhu) iyo wiilkeeda Guwo (Matin Ray Tangu) dhibaatada lagu haayo malaga dhaafi doonaa sidoo kalena dagaalka Hindiya iyo China masoo idlaan doonaa?
Maxaa Laga Yiri Sida Sheekada Tubelight Kabir Khan U Sameeyay?
Inkastoo goos gooska Tubelight dadka lagu kalsooni galiyay inuu yahay filim dheeli tiran oo sheekadiisa qalbiga taabaneyso hadana Kabir Khan wuxuu ku guul dareestay qaabka uu sheekada filimkaan u qoray ama dhacdooyinka u dhigay.
Kabir Khan wuxuu ku qaldamay inuu balaariyay sheekada filimkaan waxaana laga rabay inuu ka dhigo mid qiiro badan sidoo kalena aan la fahmi karin waxa xiga ee marwalbo dhacaayo, laakiin waa niyad jab weyn in filim weyn oo mudo badan la sugaayay noqday mid dafiic ah sheeko ahaan iyo isku xir ahaan!
Tubelight ma ahan filim adag oo dareenkaaga badali karo 100% mana u dhawo shaqadii quruxda badneyd ee Salman iyo Kabir Khan kusoo bandhigeen filimkii Bajrangi Bhaijaan.
Tubelight ma ahan filim ka run sheegay fariintiisa dagaalka Hindiya iyo China lagu xeen daabay sidoo kalena malahan dareen qiiro badan oo daawadayaasha soo jiidan karo.
Waxaa niyad jab weyn in hadalada filimka Tubelight aad u liitaan mana la mid ahan filimada Salman Khan sameeyo kuwaas oo hadalo kusoo jiidanayo lagu hadli jiray dhaliilashana waxaa iska leh Manurishi Chadha oo dhanka wada hadalka sameyntiisa filimkan u qaabilsanaa.
Tubelight qaybtiisa hore ayaa yara wanaagsan laakiin marka kala bar la gaaro waa lagu caajisaa ilaa dhamaadka filimkan looma dul qaadan karo daawashadiisa!
Ugu dambeyntii Kabir Khan filimkiisa ugu liito sheeko ahaan iyo isku xir ahaan waxaa noqday Tubelight mana loo maleeyo inuu yahay ninkii sameeyay filimada fariintooda laga wada helay Kabul Express, New York, Ek Tha Tiger, Bajrangi Bhaijaan iyo Phantom.
Bandhiga Jilaayaasha Filimkaan Sameeyeen:
Salman Khan bandhigiisa waa mid heer sare ah sidoo kalena filimkaan sheekadiisa aadka u liidato isaga kaliya ayaa loo daawan karaa, laakiin dadka waxa ay ka filayaan waa mid 100% sareyso madaama dhawaanahan looga bartay inuu sameeyo aflaan tayo wanaagsan sida Sultan, Bajrangi Bhaijaan iyo Kick.
Salman Khan wuu dadaalay laakiin filim si qaab daran sheekadiisa loo qoray qof bad baadin karo malahan sidaa darteed kaliya Tubelight waxaa daawan karo Salman taageerayaashiisa laakiin dadka caadiga ah ma daawan karaan?
Zhu Zhu atirishada reer China filimkeeda ugu horeeyay Hindi ah ma xumo doorka laga siiyay laakiin qaabka doorkeeda loo qoray oo aad u liito saameynteeda lama dareemi doono.
Wiilka yar Matin Rey Tangu waa qofka kaa qosol siin karo mada daalana sameenayo laakiin doorkiisa oo xadidan awgeed muuqaalkiisa ma ahan mid waqti badan soconaayo.
Sohail Khan doorkiisa waa mid aad u wacan gaar ahaan sida uu walaalkiis Salman ula jilaayo iyo muuqaalada furanta dagaalka marka uu joogo laakiin doorkiisa isagana ma badno.
Om Puri oo bilawgii sanadkaan geeriyooday door lagu xasuusan doono ayuu ka tagay madaama muuqaladiisa muhiim u yihiin filimka Tubelight.
Ugu dambeyntii Shah Rukh Khan muuqaalkiisa martida ah waa mid si wacan loo sameeyay weliba kusoo jiidan doono waxaa moodaa Director Kabir Khan 8-daqiiqo ilaa 10-ka daqiiqo SRK filimkaan ku leeyahay inuu u maleeyay Tubelight oo dhan inuu yahay!
Waayo SRK muuqaalkiisa kooban si wacan ayuu Kabir Khan u sameeyay balse filimka oo dhan wuu dayacay mana loo maleeyo filim sameeye weyn oo laga dambeeyo!
Tubelight siweyn ayuu dadka oo dhan u niyad jebiyay weliba niyad jab aan laga kabin karin ayuu ku riday dadka filimada ka faaloodaan madaama uu yahay mid ka mid ah aflaanta ugu sheekada liidato ee lacag weyn lagu qarash gareeyay.
Dhanka Boxoffice-ka Tubelight wuxuu saaran yahay garbaha Mega Star Salman Khan sidaa darteed sedexda maalmood ee ugu horeyso iyo maal maha Ciida filimkaan Salman Khan dartiisa ayuu u gadmi doonaa, kadibna waa hubaal inuu hoos u dhac waali ah sameyn doono!
Dadka filimada ka faaloodaan cel celis ahaan filimka Tubelight waxay ku qiimeeyeen 2-dhibcood inuu helay 5-ta dhibcood ee wax lagu qiimeeyo 2/5 taasi oo ka dhigan mid ka mid ah aflaanta ugu sheekada liidato sanadkaan!
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Tubelight:
Waxaa Aqriyay: 1,950
bill abdil says:	June 23, 2017 at 10:54 am	wuxuu noqon doonaa blackbuster waliba salman Khan dartiis
Asa says:	June 23, 2017 at 11:49 am	Asc Zaki sxb filimka Allu Arjun ee DJ sheekadiisa nala wadaaga iyo sida uu ku furmay.
Mahadsanid Ramadaan Kariim
Zakarie Abdi says:	June 23, 2017 at 11:53 am	Ramadan Mubakarak walaal sheekadiisa maanta gelinka dambe ayaan soo galin doonaa waxaa hada soo daabacnay lacagaha laga helay iyo sida uu ku guuleesan karo ama guul ku gaari karo.
Abdirizak says:	June 23, 2017 at 12:15 pm	Bro sheekada waad ku mahadsanid tahay film ka sida aad dhulka ugu jiideyso ma aha dadka daawaday ilaa hada soo dhaweyn ayuu kahelay
Zakarie Abdi says:	June 23, 2017 at 12:22 pm	Bro anigama kuma jiidin ee waxa laga sheegay ayaan soo daabacay mida kale dadka filimada ka faaloodo aragtidooda iyo daawadayaasha wey kala duwanaan karaan marka wax walbo waa xili hore aan wada sugno waana ku salamaa sidoo kalena soon wanaagsan.
Abdirizak says:	June 23, 2017 at 6:02 pm	Ok sxp kuwa filimada kafaalooda badanaa xumaan unbeey faafiyaan dadka go’aan ka iska leh daawadayaasha waaye
akki says:	June 23, 2017 at 12:30 pm	zakarie bro waan ku baryaa filinka toilet oo akshay kumar hogamiyaha kayahay tiyaatarada lasaari doono iyo lacagta lagu qarashgareeyay noo soo giliya iyo waxyaalo dheeraad ah filinkaansi raacsan
Zakarie Abdi says:	June 23, 2017 at 2:16 pm	Walaalkeen lama gaarin xili laga hadlo filimka Toilet tiyaataradiisa iyo qarashaadkiisa marka la saari rabo oo waqtigiisa soo dhawaado ayaa la ogaan karaa.
Babaha Jacaylka Srk yare says:	June 23, 2017 at 1:05 pm	waan daawan dooonaa waliba SRK dartiiisa.
Baraawi says:	June 23, 2017 at 2:51 pm	marba haduu blockbuster Khan hogaaminayo wuu awooda Igu yaraan super hit Reply »